Suldaan Puntland Ku Eedeeyay Inay Nabad-gelyo darro ka abuurayso Badhan | Somaliland.Org
Suldaan Puntland Ku Eedeeyay Inay Nabad-gelyo darro ka abuurayso Badhan
February 9, 2013	Badhan (Somaliland.Org)- Xaalada magaalada Badhan ee gobolka Bdhan ee ku yaala bariga Somaliland ayaa la sheegay inay kacsan tahay, isla markaana dadka ku nool magaaladaasi ay la soo deristay cabsi iyo kala shaki dhexdooda ah ka dib markii iska hor imaad rabshado watay oo magaaladaasi ka dhacay Khamiistii todobaadkii hore uu halka qof ku dhintay tiro kalena ku dhaawacmeen.
Rebshadahaasi magaalada Badhan ka dhacay oo ay sababeen ka dib markii siyaasiyiin reer puntland ah oo doonayay in ay magaaladaasi xafiisyo urur siyaasadeed ka furtaan iyo dadka magaalada degan oo diidanaa furitaanka xafiisyadaasi isku dhaceen, iyada oo rebshadihii halkaa ka dhacayna ay dad ku dhinteen kuwo kalena kud haawacmeen.
Suldaan Cabdilaahi Cabdi Koor oo ka mid ah salaadiinta ka soo jeeda deegaankaasi oo u waramay wargeyska Dawan ayaa sheegay in dadka ku dhaqan magaalada Badhan ay cabsi ka qabaan rebshadihii magaaladaasi ay ka abuureen, waxa uu tilmaamay xisbiyo ku sheega uu maamulka Puntland dadka deegaanada bariga Sanaag ka wado.
Suldaan Koor ayaa sheegay in dhacdadii daraad ka dhacday magaalada Badhan ay dadka magaaladaasi ka dhex abuurtay cadaawad, waxaanu maamulka Puntland ku eedeeyey inay fidno ka dhex wadaan dadka deegaankaasi.
Suldaan Cabdilaahi Cabdi Koor, oo aanu ugu horayn waydiinay sida ay dhacdadaasi u dhacday iyo cida ka danbaysay, waxa uu yidhi “Sida wax u dhaceen waxay ahayd xaga Puntland ayaa lagaga soo duulay , marna ciidan baa la soo geliyaa, marna siyaasad oo guracan ayaa la soo geliyaa, xisbiyo aan sal lahayn oo meelna ka sharciyeysnayn oo ka yimaada Puntland ayaa la yidhaa gaadhsiiya oo cod lagu raadiyo, dad boodhadh iyo watay ayaa sababtay dhacdadaasi”.
Suldaanka oo aanu waydiinay sida ay hada xaalada magaaladu tahay ayaa sheegay in xaalada magaaladu ay kacsan tahay ka dib rebshadii halkaa ka dhacay doraad “ma degana xaalada magaaladu, waxa dhacay maanta oo cusub ma jiro, laakiin deganaansho ma jiraan oo dadkii ayaa la iska horkeenay magaalada deganaa”. Ayuu yidhi suldaan Koor.
Suldaan Koor oo ka waramaya dhacdadaasi doraad ka dhacday magaalada Badhan iyo tirade dadka ku dhintay, waxa uu yidhi “dhacdaasi shalay (doraad) ka dhacday Badhan waa mid dhibaato keentay, oo ilaa heer dhimasho keentay, waxa ku dhimatay gabadh, dad kale oo badana way ku dhaawacmeen. Arrintaasi dadkii magaalada ayay fidno dhexdiisa iyo iska hor imaad ku keentay iyo dadkii ay cadaawad ka dhex abuurtay, waana fidno lagu soo dhextuuray dadka deegaanka, aad iyo aad ayaanu uga xumahay arrintaa, waxaanan u tirinaynaa taliska Faroole”.
Waxa kale oo uu sheegay Suldaan Koor in ay madax dhaqameed ahaan arrintaai hore uga hadleen isla markaana uga digeen maamulka Puntland in uu ka daayo faragelinta uu deegaanada bari ee Somaliland ka wado, isaga oo xusay in maamulka Puntland uu wado arrimo siyaasadeed oo xisbiyo uu ku dhuumanayo dadka deegaankana adeegsanaya.
“arrintaasi oo aanu hore uga dignay, Waanan ka hortagnay, oo aanu nidhi Puntland faragelinta hanaga dayso, dadka na soo weeraraya ee xisbiyada ku soo dhuumanaya oo dad adeegsanaya. Imikana waxaanu leenahay kuwaasi ayaanay dhulka iman, waxaas oo aan cidi wadan oo deegaan lagu doonayo”. Ayuu yidhi Suldaanku.
Isaga oo hadalkiisa sii watana waxa uu yidhi “xukuumada Somaliland-na waan u sheegnay inay amaanka deegaankaasi ilaaliso, dadkana waanu ka wacyigelinay, xisbiyadaa aan salka lahayn ee aan salka ku fadhiyin oo ah wax aan xisbi lagu sheegi karin weeyi oo aan deegaanadaasi laga ogolayn.”
Suldaan Cabdilaahi Cabdi Koor, ayaa ugu baaqay xukuumada Somaliland in ay taalo ka qaadato ilaalinta iyo difaaca xuduudeheeda, waxaanu yidhi “Xukuumada Somaliland ayay u taalaa talaabada ay ka qaadanayso, dadka iyo deegaankaasi waa in la ilaaliyo oo ciidamada amniga la geeyo, dawlad walba waxay leedahay qorshaheeda, waana in ay talaabadeeda ka qaado kana hortagto wixii ku xun degaanka Somaliland, iyo xuduudeheedaba”.
Waxa kale oo uu suldaan Koor u soo jeediyay maamulka Puntland in ay ka joojiso faragelinta ay ka wado dadka ku nool bariga Sanaag isla markaana ay xuduuda ku ekaadaan oo aanay soo dhaafin, waxaanu tilmaamay suldaanku in maamulka puntland dhulka ay ka taliyaan aanay xasilooni ka jirin.
Waxaanu yidhi “Puntland waxaan leeyahay dadkani waa dad deris ah, dad ehela weeye, waana laba dawladood ayay ka kala tirsan yihiin, halkiina ku ekaada, oo ha soo dhaafina, dhulka ay ka taliyaan ayaan xasiloonayn oo uu dhib ka taagan yahay, markaa dadkoodii ayaa ba ka hor jeeda, oo Faroole ka cabanaya markaa inuu faragelin ku sameeyo meelo ka baxsan ma aha”.
Suldaanka ayaa dadka deegaanka Badhan u soo jeediyay in ay ku adkaystaan sida ay uga soo hor jeedaan faragelinta iyo xisbiyada aan salka lahayn ee uu ku hayo maamulka Faroole, isaga oo intaasi raaciyay in xukuumada Somaliladn ay dadka deegaanka Badhan gaadhsiiyaan waxyaabaha ay xaqa u leeyihiin “waxaanu faraynaa dadkaa laba arrimood oo ah Faroole sida aad uga hor jeedaan waa waxa aad anaguna waxanu leenahay faragelinta ha ka daayo dadkayaga, xisbiyadan aan waxba ka jirin ee fidnada ah.waa dad u baahan in waxa ay xaq u leeyihiin la gaadhsiiyo, aad baan ugu dhaliilsanahay in ay dhulkaa wax gaadhsiin kari waayaan” ayuu yidhi suldaan Koor.
Previous PostShir Hawleed Lagu Lafo-gurayay sidii loo Xakamayn lahaa khataraha Dawooyinka oo Hargeysa lagu qabtayNext PostMadaxweyne Siilaanyo Iyo Weftigiisii Oo Si Weyn Loogu Soo Dhaweeyay Ingiriiska	Blog